Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Caafimaad qabi / Khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka (ANDTS)
Tobaakada waxaa ku jira maadooyin badan oo sun ah. Waxyaabo ay ka mid tahay nikotiin taas oo ah maado balwad keenta kuna jirta alaabta tobaakada ah.Tobaakada waxay xitaa ku jirtaa buuriga afka la geliyo, sigaarka, sigaarka korontada iyo badeecada. Sigaaryada korontada badanaaba waxaa ku jirta nikotiin.
Sigaar cabistu waxay kordhisa khatarta dhowr cudur oo keentaa in dadku geeriyoodaan wakhti hore. Xanuunka neefta, kansarka, cudurada sambabada, cudurada wadnaha iyo xididada iyo nabarka caloosha waa tusaale ka mid ah dhaawacyada ay sigaar cabistu sababto. Adigu si fudud ayaad balwad ugu yeelan kartaa nikotiinta. Balwad micnaheedu waa in jirku la qabsanayo inuu wax helo oo doonayo inuu mar kale waxaas helo. Haddii aad balwad ku yeelatay nikotiinta waxaa badanaaba adkaan karta inaad iska joojiso.
Alaabta leh tobaakada ama nikotiinta ma la ogola in laga iibiyo dadka ka yar 18 sano. Sharcigan waxaa loogu talogalay in lagu ilaaliyo dadka dhalinyarada ah. Waa mamnuuc in sigaar lagu cabo maqaaxiyaha cuntada, meelaha kafeega, goobaha shaqada, banaanka isbitaal, kadinada, jardiinooyinka iskoolka, goobaha isboortiga, goobaha caruurtu ku ciyaarto, meelaha baska lagu sugo iyo kaabadaha tareenka laga raaco.
Haddii aad doonaysid inaad iska joojisid sigaarka ama buuriga waxaad caawimaad ka heli kartaa rugtaada caafimaadka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Hel talooyinka in la joojiyo sigaarka kuna qoran Youmo – rugta qaabilaada dhalinyarada kuna qoran dhowr luqadood intarnatka.
Khamri wuxuu ku jiraa cabitaano badan oo kala duwan, tusaale ahaan biirka, siidarka, fiin iyo khamriga kulul. Khamrigu waa sun raad ku yeelata jirka. Qofna uma fiicna in la cabo khamri baan. Laakiin waxay khatar dheeraad ah ku tahay dhalinyarada inay wax badan cabaan. Maskaxdu horumar ayay ku jirtaa ilaa iyo da´da 25 sano. Sidaas darteed dadka dhalinyarada ah si fudud ayuu u dhaawici karaa khamrigu. Waxaa kale oo weyn khatarta in balwad ay yeeshaan dadka bilaabay inay khamriga cabaan markay yihiin dhalinyarada.
Gudaha Iswiidhan dhamaan dadka ka yar 18 sano waxay xisaabsanyihiin caruur. Si loo ilaaliyo caruurta iyo dhalinyarada waxaa jira sharciyo khuseeya khamriga.
Adigu waa inaad ahaataa ugu yaraan 18 sano si aad khamri uga cabta maqaaxi cunto ama baar
Adigu waa inaad ahaataa ugu yaraan 20 sano si aad khamri ugu iibsato Systembolaget
Sharci daro ayay ku tahay qof weyn inuu qof ka yar 20 sano u iibiyo ama siiyo khamri
Haddii adiga ay ku haysato dhibaato khamriga ah ama aad ka wel-welsantahay saaxiib waxaad la xiriiri kartaa kooxda caafimaadka ardayda ee joogta iskoolka, rugta qaabilaada dhalinyarada ama rugta caafimaadka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan balwada khamriga kuna qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177.
Waxaa jira urur loogu talogalay adigaaga ah dhalaanka kaas oo lagu magacaabo BRIS - Caruurta xuquuqdooda dhanka bulshada. BRIS waad wici kartaa, u diri kartaa ii-mayl ama la sheekaysan kartaa la-taliye. Waa bilaash oo waxaad la hadli kartaa adigoo aan sheegin magacaaga. BRIS ka wac telafoon lambarka 116 111.
Wixi dheeeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee BRIS.
Haddii aad ka wel-welsantahay qof aad u sakhraama:
La xiriir qof weyn
La xiriir talo-bixinta daryeelka bukaanka lagana helo telafoon lambarka 1177
Wac 112 haddii qofkani yahay bilaa miyir
Haddii aad doonaysid inaad wax dheeraad ah ka ogaato khamriga waxaad booqan kartaa boggagan intarnatka:
UMO – rugta qaabilaada dhalinyarada ee dhanka intarnatka.
Youmo – rugta qaabilaada dhalinyarada oo ku qoran dhowr luqadooda dhanka intarnatka.
Drugsmart – bog intarnat oo leh macluumaad ku saabsan khamriga iyo daroogooyinka kale.
Iswiidhan waa ka mamnuuc dhamaan iibinta daroogada. Kalmad kale oo loo isticmaalo daroogada waa maan-dooriye. Waxaa jir daroogooyin kala duwan oo badan sida tusaale ahaan, amfatamiin, kokayn, hirawiin iyo xashiishada. Qaadku wuxuu xisaabsanyahay maan-dooriye. Waxaa xitaa jira dawooyin xisaabsan inay yihiin maan-dooriye. Kuwaas waxaa lagu qaadan karaa oo keliya iyadoo dhakhtar qoray.
Maan-dooriyaha ugu badan Iswiidhan waa xaashiishada (xashiishada iyo mariwaanada). Isticmaalka xashiishadu wuxuu keeni karaa tiro ah cawaaqib xumo bulsho, tusaale ahaan dhibaato gudaha iskoolka ah, baddelka saaxiibada iyo dagaal guriga ah. Xashiishadu raad ayay ku yeelataa maskaxda oo waxay keeni kartaa in qofku si fiican u fikiri karin oo yahay sidii qof maqan oo aan jawaabi karin. Waxaa kale oo adkaan karta in la xusuusto waxyaabo mar dhawayd dhacay iyo inay qofka ku adkaato in waxyaabo cusub la barto.
Haddii adiga ay ku haysato dhibaato maan-dooriye ah ama aad ka wel-welsantahay saaxiib waxaad la xiriiri kartaa kooxda caafimaadka ardayda ee joogta iskoolka, rugta qaabilaada dhalinyarada ama rugta caafimaadka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan maan-dooriyayaasha kuna qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177.
Haddii aad doonaysid inaad dheeraad ka ogaato daroogada waxaad booqan kartaa boggagan intarnatka: